Alshabaab oo taageero ka dalbaday shacabka ku nool gobolka Galgaduud – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo taageero ka dalbaday shacabka ku nool gobolka Galgaduud
Ceelbuur – Mareeg.com: Alshabaab qeybta gobolka Galgaduud ayaa shacabka ka dalbaday iney u diyaar garoobaan dagaal lala galo ciidamada Itoobiya ee ku biiray AMISOM, islamarkaana maalmihii lasoo dhaafayey ku qulqulayey Dhuusamareeb iyop Guriceel.
Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud ee Al-Shabaab Sheekh Xasan Yacquub ayaa ugu baaqay shacabka gobolkaas inay ku garab siiyaan la dagaalanka Ciidamada Itoobiya ee gudaha u soo galay qeybo ka mid ah Galgaduud.
“Waxaa nagala rabaa dhamaanteen inaan u diyaar garowo dagal ka dhan ah cadawga soo jireeka ah ee gudaha dalkeena soo galay, Galgaduud meesha ay ka soo bilaabato ilaa halka ay ku dhamaato waxa la idinka rabaa taageeradiina inaad muujisaan” ayuu yiri Sheekh Xasan Yacquub.
Saraakiil ka tirsan Ahllusuna Waljamaaca oo ku sugan Dhuusamareeb ayaa sheegay iney ki wajahn yihiin degmooyinka Ceelbuur, Ceeldheer iyo Galhareere oo ka tirsan Galgaduud, islamarkaana Alshabaab gacanta ku hayaan.
Madaxweyne Xasan oo lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha Aadan Cadde